बढैयाताल गाउँपालिका | BARDIYA ONLINE |
बर्दियाको बढैयाताल डाँफेबाट १४ थान सालको गोलिया बरामद
बढैयाताल- ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखर बर्दिया र प्रहरी चौकी जमुनी संयुक्त प्रहरी टोली द्वारा बढैयाताल गा.पा. वडा नं. १ डाँफेमा १४ थान सालको गोलिया बरामद गरेको छ । बढैयाताल गा.पा. वडा नं. १ डाँफेको राधादेवी अधिकारीको खाली जमिनमा वेवारिसे अवस्थामा १४ थान (परिमाण ४३.४ यू.फुट अन्दाजी मुल्य रु. १०८,०००।-) बराबरको सालको गोलिया प्रहरिले फेला पारेको जनाएको हो । बरामद सो काठलाई सव [पूरा पढ्नुहोस्]
बर्दिया- ठाकुरबाबा नगरपालिका–६ मोतिपुरको गिठे खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर रामबहादुर गिरीकी १० वर्षीय छोरी सीता गिरी र केशवनाथ योगीका ८ वर्षीय छोरा ध्रुवनाथ योगीको ज्यान गएको छ । खोलामा स्थानीयले पानी जमाउनका लागि खानेको खाल्डोमा डुबेर उनिहरुको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय भुरीगाउँले जनाएको छ । डुबेर बेपत्ता भएको झण्डै दुई घण्टापछि प्रहरी र स्थानीयले शव फेला [पूरा पढ्नुहोस्]
बढैयाताल- बढैयाताल गाउँपालिकाको वडा नं.३ मा रहेको मानझुण्डी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको २०७५/०७६ को सार्वजनिक सुनुवाई तथा पाँचौ चुनावी साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक बनले स्थानीय जनताको हक हितको लागि कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए । साथै उनले सामुदायिक वनले वातारण संरक्षणमा पनि सेवा [पूरा पढ्नुहोस्]
-चौधरी अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर छिन् । पाठकले अंग्रेजी विषयमा स्नातक गरेकी छन् । शिक्षा निर्देशिकाले मावि तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । -आफूलाई शिक्षक नियुक्तिबारे कुनै जानकारी नभएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीले बताए । बढैयाताल,बर्दिया। बढैयाताल गाउँपालिकाले संघीय शिक्षा नियमावली खारेज गरेर आफूखुसी [पूरा पढ्नुहोस्]
मैनापोखर, बर्दिया । नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुँदै बढैयाताल गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारले बनाएको शिक्षा नियमावली खारेज गरेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा नियमावली खारेज गरी आफैँ नयाँ नियमावली बनाएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार बढैयाताल गाउँपालिकाले २६ शिक्षक समेत नियुक्त गरेको छ । स्थानीय सरकार गठनपूर्वको नियमावली खारेज [पूरा पढ्नुहोस्]
सिकलसेल एनिमिया बिरामीलाई जिवनभर उपचारको ब्यवस्था मिलाउन बढैयातालका बडघर सकृय हुदै
बढैयाताल,बर्दिया। जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिकाका बडघरहरु सिकलसेल एनिमिया बिरामीलाई निशुल्क चेकजाँचको ब्यवस्था र जिवनभर उपचारको ब्यवस्था मिलाउन बढैयातालका बडघर सकृय हुदैछन् । बढैयाताल गाँउपालिकामा सिकलसेल एनिमिया रोग संम्बन्धी गाँउपालिकाका बडघरहरुसंग छलफल गरिएको छ । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले सिकलसेल एनिमिया रोग बारे निशुल्क चेकजाँचको ब्यवस्था तथा [पूरा पढ्नुहोस्]
बढैयाताल,बर्दिया। बढैयाताल गाउँपालिका भित्र रहेको सामुदायिक विद्यालयका प्राधानाध्यापकहरु आफनो विद्यालयमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेका छन् । बढैयाताल गाउँपालिका भित्रका सामुुदायिक बिद्यालयहरुमा स्वास्थ्य परीक्षण पहलको लागि बढैयाताल गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्राधानाध्यापकहरुसंग आज छलफल गरिएको छ । बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं.३ मा रहेको [पूरा पढ्नुहोस्]
बढैयाताल,बर्दिया। बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाँउपालिकाको जमुनी स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्सको आवश्यता रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । बढैयाताल वडा नं २ मा रहेको स्थानीय सभाको नियमित ३/३ महिने बैठकमा नागरीक समाजको अगुवाहरुले जमुनी स्वास्थ्य चौकीमा एउटा एम्बुलेन्सको आवश्यक्ता रहेको बताएका हुन । जमुनी स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना भएको २ बर्ष [पूरा पढ्नुहोस्]